ကျွန်မနှင့် သမ္ဘူလ … | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » ကျွန်မနှင့် သမ္ဘူလ …	34
ယောင်္ကျားများ၏ ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကျသော သူအား မယုံသင်္ကာဖြစ်သောအခါဝယ် သမ္ဘူလသည် သစ္စာဆိုကာ ရေဖြင့် ဘုရားလောင်း၏ကိုယ်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော နူနာအား ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးလိုက်၏ …. ထိုမျှသာသိ၍ ကျန်တာ မတိသော ကျွန်မသည် လွန်စွာ ရှက်စရာကောင်းနေ၏
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်မ၏ မေလ်းအကောင့်သည် ထိုနာမည် နာမကို ယူထားသောကြောင့်တည်း… တက်လာသော လူများသည် အခါအားလျှော်စွာ မေးတက်ကြ၏
မဟုတ်ပါ ….. ဘုရားလောင်း၏ မိဘုရား သမ္ဘူလ…. ထိုသို့ဆိုသော်.. ထိုဘုရားလောင်းသည် မည်သူနညး… ကျွန်မ မသိချေ… တညတွင် စိတ်ထဲမကျေနပ်သည်ချိကာ .. အိမ်၌ရှိသော ငယ်ငယ်ကတည်းက ဇာတ်ကြီး 10ဘွဲ့ အား အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်အဖြစ် အမြဲတစေ ပြောပြနေသော အဒေါ်က်ို မေး၇ာ ထိုအဒေါ်ပင် မသိချေ…. အိမ်၌ ချိသော မောင်နှမ 10ယောက်တွင် တယောက်တလေတောင်မသိသောအခါ လွန်စွာပင် ထပ်၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်၏
လှံကို ပစ်လိုက်ရာတွင် ညောင်ပင် 10ပင်ကိုပင် ထုတ်ချင်းပေါက်နိုင်ကြောင်း ပြောပြသော်လည်း ကျွန်မ မသိချေ… မြန်မာတွင် ရာဇ၀င်ပေါင်းများစွာ ရှိ၏…. ထိုရာဇ၀င်များအား မသိသော ကျွန်မသည် လေ့လာဘို့ တော်ေ်ာလိုအပ်နေသောသူဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် မှတ်ချက်ချမိပါသည်…
PS… ထို သမ္ဘူလ၏ အမျိုးသား အားတိသောသူချိပါက ကျွန်မသိလိုပါသည်…. ကျေးဇူးတင်စွဖြင့် ပြောပြပေးရန် အမှာတော် ထပ်ပါးလိုက်ပါသည်…. About Yin Nyine Nway
King of Secrets (Bo Min) says: အော်… အမက ကျွန်တော့်ထက်တောင် ပိုသိတာဘဲ၊ ကျွန်တော်က ကျန်စစ်သား မိန်းမ သမ္ဘူလ ဘဲ သိတာ။
ဘဲဥ says: သံဗူးလ ဆိုတာ ဇရပ်ထဲမှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ အရူးလေးပဲသိဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 361
မမ အညာသူ says: တိဝူးးးးးးးးးးးးးတိဝူ
မောင်ပေ says: နောက်တစ်ခါ ဘယ်သူ့ ရဲ့ “သမ္ဘူလ” လဲ လို့ ထပ်အမေးခံရရင် ဒီလိုဖြေပါ ။
နွေးက ကိုပေ့ ရဲ့ “သမ္ဘူလ” လေးပါရှင့် လို့ ။ နော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1290
ရွာစားကျော် says: အူးလေး အူးလေး
သူချိုးဖို့ရေ ခုထိဖြည့်မထားသေးလို့တဲ့ လာရင်တုတ်ကောက်ခဲ့တဲ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 923
mamanoyar says: ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Yin Nyine Nway says: ကိုပေ့ရဲ့ သမ္ဘူလ ဆို ကိုပေ့ မိန်းမ လိုက်ရိုက်မှာပေါ့
သကြားလုံးကြော် says: သိချင်လာပြီ။
ဖိုးထောင် says: သံဗူးလှလှ မလှလှ ဈေးကြီးတယ် တို့ကတော့ စည်ပဲချတယ် တို့နာမည်တောင် စည်များရှင်ဖိုးထောင်တဲ့
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: ငံပြာရည်သည်ကိုမေးကြည့်ဗျို့……
Yin Nyine Nway says: ငံပြာရည်က အဒူတုန်း
အရီး Khin Latt says: သမ္ဘူလ ဆိုတာ
သူ့ရဲ့ သား လေး က ကြီးလာတော့ သားကြီးဖြစ်လို့ စီနီယာ အစဉ်မှာ (၁) ဖြစ်နေပေမဲ့ သူ့ကို နန်းမပေးတဲ့ မြေး (အလောင်းစည်သူ) ကို နန်းတင် ခဲ့တဲ့ ဖခင် ကို စိတ်မကွက် ဘဲ သေကာနီး အဖေအတွက် ရှိသမျှ ရောင်းပြီး ဘုရားတည်ကာ ကျေးဇူးဆပ် သူ လို့ နာမည်တွင် ခဲ့။ ရာဇကုမာရ် မင်းသား လို့ ခေါ်။ သမီး ရင်ငြိမ်း အခွင့် ရခဲ့ ရင် ပုဂံ ကို သွား၊ မြစေတီကျောက်စာ ကို ရှာဖတ်ကြည့်။ အဲဒါ သူရေးခဲ့ တာတဲ့။ ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ လို့လဲ ခေါ်သတဲ့။
ကိုယ်မှတ်မိတာ နဲ့ ဂူးဂဲလ် ကြည့် ပြီး မျှပါတယ်။ :P
San Hla Gyi says: အင်း အမတော်ကြီး မခင်လတ်ရေ
တေလေငှက် says: ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတုံးက အပြောင်အပျက်လေးပါ။ အရီး ခင်လတ် ဗားရှင်းနဲ့ နဲနဲကွာတယ်။
Yin Nyine Nway says: ကို San Hla Gyiေ၇…. ကျေးဇူးပါနော်
အရီး Khin Latt says: ကိုစံလှကြီး ကြုံ ရင် ဒါလေးကို ထပ်ချဲ့ပေးပါဦး။
San Hla Gyi says: မခင်လတ်ရေ
Was this answer helpful?LikeDislike 3349
အရီး Khin Latt says: ကိုစံလှကြီး
ကဲ ကျွန်မ ရဲ့ သမိုင်း မှာ စာကျေပုံများ။ တွေ့ပြီမဟုတ်လား။ :D
Was this answer helpful?LikeDislike 697
San Hla Gyi says: အမကြီး မခင်လတ်ရေ
Was this answer helpful?LikeDislike 752
Yin Nyine Nway says: အရီးလတ်…. ကျေးဇူးပါ …….
အရီး Khin Latt says: Source From – http://www.pannaparami.com/2010/06/blog-post_9932.html ကြောင်ဖြူအရပ်ရှိ မထီးတူမ သမ္ဘူလသည် ကျန်စစ်သားနှင့် ပေါင်းဖော်ခဲ့ရာမှ သားယောက်ျား မွေးဖွားသည်။ ကျန်စစ်သား မင်းပြု၍ မကြာမီပင် ကျန်စစ်သားပေးခဲ့သော လက်စွပ်ကိုယူ၍ သားငယ်ကို လက်ဆွဲလျက် ရောက်လာသည်။
ကြောင်ဝတုတ် says: ရှေးဘုရင်တွေများ ကျေးဇူးဆပ်နည်းက တော်တော်လေးအတုယူဖို့ကောင်းသားနော်…
Yin Nyine Nway says: ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ… ကြည့်ကျပ်ပြီးလဲ ကျေးဇူးဆပ်အုန်းနော်
အရီး Khin Latt says: ဟိဟိ
ကိုယ့် မှာ မသိတာတွေ အများကြီးပါလို့။ :D
Yin Nyine Nway says: ဟုတ်တ်ယ… အခုဆို သိချင်တာဒွေ သိခွင့်၇ပီ…
San Hla Gyi says: မ Yin Nyine Nway ရေ
Yin Nyine Nway says: လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ပါဒယ်ချင့်
Was this answer helpful?LikeDislike 8210
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုစံလှကြီးရေ
Moe Z says: ကြားဖူးခဲ့တာကြာပြီး မေ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ပြောပြပေးလို့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုစံလှရေ
ကြောင်ကြီး says: သမ္ဘူလတော့သိဝူး၊ သံဗူးဖျော်ရည်သောက်လို့ ကောင်းတာတော့သိဒယ်..
Yin Nyine Nway says: ဒီလောက်ပဲတိဒါလား ကိုကိုကြောင်
San Hla Gyi says: မ Yin Nyine Nway ကိုပေါက် ကိုမိုးဇက်နဲ့ ကိုကြောင်ကြီးရေ
Comments By Postလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - uncle gyiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - garuda - Ma Maဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - phoe cho - phoe choကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - uncle gyi - KZအတ္တဆန် - uncle gyi - Ma Maရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - uncle gyi - KZမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - uncle gyi - KZယုံလား? - uncle gyi - KZမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mr. MarGaပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - TNA - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46မင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities